Iiphedi ze-enamel, ii-Keychains zesiko, iMedali yeZemidlalo, i-Lapel Pin-Sanjia
Uyilo olwenziwe ngokwezifiso ...
Ukucaciswa kwesiko Iimveliso zesiko se-enamel, iibheji, imbasa, ingqekembe, isitshixo, inja, ii-cufflinks, ibhanti bopha, uphawu lwencwadi, njl.JPG, PNG, PDF, AI, CDR, PSD, njl. i-aluminium, isinyithi, intsimbi engenasici, ubhedu, ubhedu, isilivere, njl.njl. Ubunzima beRange nge-1-10mm, okanye obunye ubukhulu ngokuxhomekeke kwimfuno yakho. Nesingxobo Umbala nickel / nickel emnyama / imbovane ...
Igolide Plated Metal Badg ...
Igolide Plated Abantwana Brooc ...
Igolide Plated Metal Meda ...
Ubugcisa beGolide yePlat ...
Glitter wayesebenzisa Pin Cus ...
Hard wayesebenzisa Pin Custom ...
Uyilo lwesiko kabini-s ...
Ukucaciswa kwesiko Iimveliso zesiko ...
Zinc ingxubevange Die Ivoti
Amabini aMacala aMabini ...
Kabini emacaleni Metal Coi ...
Kabini emacaleni Custom ...
Uyilo lwesiko Ena Ena ...
Umlawuli weSiko S Coi ...
Isiko elenziwe ngeMarathon M ...
Kwenziwe ngentando abantwana Gradua ...
Ibhola yeBhola ekhatywayo eyenziwe ngokwezifiso ...
Iflegi yeSizwe yeNsimbi La ...
Amacandelo amabini adityanisiweyo ...
Igolide Icwecwe nge-Ename ...
Elungiselelweyo Ibheji Cwangcisa C ...
Cust 2D 3D Metal Cust ...
Zonke iiNkcukacha zingenziwa ngentando yesiqhelo o ...
I-logo yesiqhelo yeGolide ...
Zonke iinkcukacha zinokwenziwa ngentando ...
Imilo Round Mirror Eff ...
Indawo engenanto yeTango ...
Imilo yeebhotile zeBlue 3D D ...
AKUKHO Chukumisa iTouch Opener ...
Ukucaciswa kwesiko Imveliso yesiqhelo ...
Isilwanyana esiNzima se-Ename ...
Isinyithi sokuPrinta ...
Umzi mveliso wethu uxhotyiswe ngokupheleleyo ngenkonzo enye yokwenza ulwenziwo lweebheji ze-enamel, iingqekembe, iimedali, ii-keychains ...
Umzi mveliso wethu uqinisekisiwe yi-ISO 9001 kunye neTUV. Sineenkqubo zokulawula umgangatho ogqibeleleyo ukuqinisekisa ukuba zonke iimveliso ozifumeneyo ziyafaneleka.
Sinikezela ubungqina bobugcisa basimahla kunye nohlaziyo olusekwe kuyilo loyilo lwabathengi okanye iisampulu. Imveliso ayizukuqala de umsebenzi wamkelwe.
Singumthombo wemithombo enezixhobo zemveliso ezizenzekelayo kwaye iqela lethu linecandelo elicacileyo labasebenzi, elonyusa kakhulu ukusebenza kakuhle kwemveliso.
Iminyaka eli-15 nangaphezulu yamava kuThengiso
Umzi-mveliso wethu uvelisa ibheji ye-enamel ukusukela ngo-2005, uninzi lwabasebenzi bethu bezobuchwephesha banamava angaphezu kweminyaka eli-10 kule nkalo. Isenza ukuba sikhethe phakathi kwabaxhasi abafuna ukusebenzisana ixesha elide kunye nomenzi webheji othembekileyo kunye nochwephesha.
Inkonzo yesiqhelo emileyo
Umzi-mveliso wethu unokwenza inkonzo ukuyila / ukwenza iinkqubo, ukwenza ukungunda, ukulahla izinto, ipolishi, ukuxhoma, ukupeyinta, ukuprinta ukujonga umgangatho, ukuhlanganisa kunye nokupakisha. Inkonzo yokuma kwindawo enye yeyokonga okubalulekileyo kwiindleko zemali nexesha.
Sithumele iimfuno zakho ezineenkcukacha ukufumana iikowuti ezichanekileyo, okanye ushiye imeyile yakho, siya kuba kunxibelelana kwisithuba seeyure ezili-12.